कोरोनाको सन्त्रास : औषधि अभावको जोखिम कति ? के–के हुन्छ नेपालमै उत्पादन ?
कोरोना संक्रमणको विस्तारसँगै बजारमा सिटामोल अभावको हल्ला फैलिएको छ ।
भारतले नेपालसहित अन्य देशमा २६ प्रकारका औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको समाचारसँगै नेपालमा सिटामोल लगायतका अन्य अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा प्रभाव परेको हो ।
तर नेपाल औषधि लिमिटडले भने आफुसँग कच्चा पदार्थ स्टक रहेकाले सिटामोलसहित अन्य ५ प्रकारका औषधिहरू बजारमा अभाव नहुने दाबी गरिरहेको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले अहिले ५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गरिरहेको छ जसमा सिटामोल, सिटाप्लस, जिवनजल, ग्लिसिरिन र डिस्टिल वाटर रहेका छन् ।
‘हामीले लिमिटेडको तर्फबाट २ वर्षको म्याद भएका औषधिको उत्पादन गरिरहेका छौं, हामीसँग ५ टनभन्दा धेरै अहिले पनि कच्चा पदार्थ स्टक अवस्थामा रहेको छ,’ लिमिटेडका सूचना अधिकारी टिकाराम अर्यालले वताए ।
अर्यालका अनुसार लिमिटेडमा रहेको कच्चापदार्थबाट अहिले बजारमा रहेको सिटामोलको २५ प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिन्छ । ‘अहिले सिटामोलको उत्पादन भइरहेको छ । हाम्रो उत्पादनले बजारमा हुन सक्ने अभावलाई घटाउन सक्छ । स्टक रहेको कच्चा पदार्थबाट १ करोड भन्दा धेरै ट्याबलेट उत्पादन गर्न सकिन्छ,' उनले भने ।
केही वर्षदेखि उत्पादन बन्द रहेको लिमिटेडलाई दुई वर्षअगाडि नविन्द्रराज जोशी उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री हुँदा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यतिबेला सरकारले सरकारले लिमिटेडलाई १४ करोड ६५ लाख उपलब्ध गराएको थियो ।
अहिले लिमिटेडले मृगौलाको डायलासिस गर्न आवश्यक पर्ने हेमोडाइलासिस वाटर उत्पादनको तयारी अगाडि बढाएको छ ।
‘हामीले हेमोडाइलासिस वाटर उत्पादनको लागि ३ करोड बजेट व्यवस्था गरेर टेण्डर समेत आह्वान गरिसकेका छौं,' अर्यालले भने,' अब यो छिट्टै नै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ ।'
अर्यालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लिमिटेडले ६० लाख बराबरको औषधि बिक्री गरेको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।